6 nooc oo miisaska sariirta dhinaceeda ah si loogu diyaariyo qolka jiifka | Bezzia
6 nooc oo miisaska sariirta dhinaceeda ah si loogu diyaariyo qolka jiifka
Maria vazquez | 30/04/2021 18:00 | Dharbaaxo
Istaandarada habeenkii waa qeyb ka mid ah kooxdaas alaabta guriga taal waxaan tixgelineynaa lagama maarmaanka qolka jiifka. Iyagu waa xulafooyin weyn si ay u kordhiyaan awoodda keydinta qolka jiifka waxayna muhiim u yihiin in la helo dhammaan waxyaabaha aan u baahan nahay marka aan sariirta aadno iyo marka aan kacno.
Maxay yihiin walxaha aad isticmaasho ka hor intaadan seexan iyo markaad toosto? Maxay yihiin walxaha kale ee aan ahayn kuwa aad jeclaan lahayd inaad awood u yeelato inaad ku abaabusho istaaga habeenkii? Baro baahiyahaaga wax ku oolka ah, Go'aami qaabka loo yaqaan 'nightstand' ee ugu habboon qurxinta qolka jiifka oo dooro midka ku habboon baahiyahaaga.
1 Dul sabeynaya
2 Nordic waxyooday
3 Nooca caadiga ah iyo kan casriga ah
Istaandhigyada habeenkii sabeynaya ayaa beddel weyn u ah qurxin meelaha yaryar. Marka aadan haysan boos badan sariirta dhinaceeda midkood ama aadan rabin inaad qolka ku buuxiso alaabta waaweyn, kuwani waxay noqdaan xulaf weyn sababo kala duwan awgood:
Arag ahaan waa u fudud yihiin. Waxay kordhiyaan dareenka waasacnimo ee qolka la dhigay.
Meel yar bay qabsadaan. Cabirka inta badan moodooyinka sabeynaya ayaa kuu oggolaanaya inaad dhigatid meelo yaryar oo miis jaangooyo ahi meel ku lahayn.
Waxay u oggolaadaan inay si nadiif ah u nadiifiyaan dhulka. Iyaga ayaa lagu dhejiyaa darbiga taas oo ka hortaageysa dhaqaaqa. Si kastaba ha noqotee, marka la sarreeyo, waxay fududeeyaan nadiifinta qolka maalin kasta.
Aad bay u qurxan yihiin. Iyagoo ka istaagaya miisaska dhaqameed, waxay qolka siinayaan taabasho asal ah.
1. DIY, 2. EKET-Ikea, 3. Magaaleyn, 4. Kroftstudio
Miisaska alwaaxda sabeynaya ayaa maanta ah kuwa ugu caansan ee qurxinta qolka jiifka iyadoo ay ugu wacan tahay diirimaadka ay u keenayaan. In kastoo kuwa leh naqshadaha ugu yar ee codadka iftiinka: caddaanka, kareemada, cawl… waxay galaan masraxa dhexe ee qolalka jiifka leh bilicsanaanta casriga ah. Waxaad ka heli kartaa iyaga hal ama labo khaanad si aad u kordhiso awooddooda keydinta iyo / ama iftiinka ku dhex jira si aan loo baahnayn in laambad dul saaro.
El qaabka nordic Waxay noqotay tobankii sano ee la soo dhaafay halbeeg lagu naqshadeeyo gudaha. Isku darista qoryaha dabiiciga ah faahfaahinta cad, miisaska qaabkani wuxuu u keenayaa iftiin iyo diirimaad qolalka jiifka ee qaababka kala duwan. Afarta lugood, guud ahaan waxay leeyihiin hal ama laba khaanadood oo kuu oggolaan doona inaad ku haysato waxyaabaha muhiimka u ah sariirta agteeda.
1. Guriga Nunila-Kave, 2. Sklum, 3. Larsen-Made, 4. Sklum
Nooca caadiga ah iyo kan casriga ah
Elegence iyo casriga ayaa qeexaya qaabka qolkaaga jiifka? Hadday sidaas tahay, meelaha lagu caweeyo ayaa si fiican ugu habboon. Kuwa isku dara a cad oo dhalaalaya oo leh waxyaabo dahab ah Iyagu waa kuwa ugu caansan qurxinta qolalka jiifka oo leh derbiyo cad, saqaf dhaadheer oo leh qaabab iyo daaqado waaweyn.
Miisas yar-yar oo ay sameeyeen Made iyo Ikea Taabasho casri ah, si kastaba ha noqotee, waxay siin doontaa qolka jiifka qolka naqshadaha midabka madow qaabab toosan iyo qaab yar. Miyaad ku dhiirrataa midabka? Naqshadaha isku daraya qaababka, xarriiqyada iyo gooladaha, sida 'Made', ayaa qolkaaga jiifa siin doona isku dheellitirnaan u dhaxaysa taariikhi iyo casri.
Miisaska sariirta jiifta ee qaabka warshadaha guud ahaan waxay leeyihiin qaab bir ah. Qaarkood waxaa lagu dhiirrigeliyaa naqshadeynta kuwa qufulka birta ah ee waagii hore loo isticmaali jiray warshadaha, isbitaalada ama jaamacadaha, in kasta oo badanaa lagu cusbooneysiiyo qaabab wareegsan iyo midab badan.
1. Guriga Savoi-Kave, 2.Bavi-Sklum, 3. Trixie-Kave Home, 4.Nikkeby-Ikea, 5.Kluis-Miv Interiors Sidoo kale waa iska caadi in la helo naqshado waxay isku daraan birta iyo qoryaha si loo gaaro nashqado diiran. In badan oo dabiici ah oo qallafsan qalabkani waa, inta badan qaabka warshadaha ee alaabta guriga ayaa kor loo qaadayaa. Markay isku mid ahaadaan oo hufan yihiin, ayay ugu sii dhowaanayaan bilicsanaanta casriga ah.
Si aad qolkaaga jiifka ah uhesho taabasho jaceyl, maheli doontid saaxiib kafiican kuwa meelaha laga caweeyo habeenkii oo umuuqda inay kasoo baxeen qowladda ayeeyada. Naqshadaha lugaha la rogay, xarriiqyada qalooca iyo dusha cad ee laga xayuubiyay ayaa ah xulasho weyn, in kasta oo aanan meesha ka saari doonin kuwa wata darfaha mesh ama cannage.
1. Ikea, 2. Vilmupa, 3. Kave Home, 4. Vilmupa
Iyagu ma laha sumcad la mid ah taariikhihii habeenki laydhadhka mana aaminsani inaysan waligood yeelan doonin, laakiin waa ikhtiyaar caan ah oo sii kordheysa. Guud ahaan la soo saaray alwaax lacquered oo ku jira codadka satin ama dhalaalaya, waxay leeyihiin awood qurxin weyn.
1. Guriga Kurb-Kave, 2. Odie-Made, 3. Cairn-Made, 4. Babel 02-Sklum
Muuqaal ahaan fudud, waxay na siin karaan ilaa saddex khaanad si wax loo kaydiyo. Si kastaba ha noqotee, kuwani uma badna inay noqdaan kuwo la taaban karo sida kuwa leh qaababka laba jibbaaran. Sababta Sababtoo ah way ka sii dhib badan tahay, marka loo eego qaabkeeda, si looga faa'iideysto booska keydinta ee ay na siinayaan.
Noocee istaandarka habeenkii ah ayaad dooran laheyd inaad qalabeyso qolkaaga jiifka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Dharbaaxo » 6 nooc oo miisaska sariirta dhinaceeda ah si loogu diyaariyo qolka jiifka
Ma lagu talinayaa in carruurtu caga-la’aan ku baxdo?